Daawo Sawirro: Amiirka Qadar oo gaari ilaalo la'aana ku wareejinaya Erdogan - Caasimada Online
Home Dunida Daawo Sawirro: Amiirka Qadar oo gaari ilaalo la’aana ku wareejinaya Erdogan
Daawo Sawirro: Amiirka Qadar oo gaari ilaalo la’aana ku wareejinaya Erdogan
Doha (Caasimada Online) – Warbaahinta dalka Qadar ayaa si aada u baahineysa sawiro muujinaaya Amiirka dalka Qadar Sheekh Tamim bin Xamad Al Thani oo magaalada Doha ku wareejinaaya dhigiisa Turkiga Recep Tayyib Erdogan.
Amiirka Sheekh Tamim ayay kaamiradu qabatay isagoo wada gaari khaas ah oo uu shirka hore ka saaran yahay Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo socdaal ku gaaray Qadar.
Gaariga ay sida wada jirka ah u saarnaayen Tamim iyo Erdogan ayaa waxaan wehlin gaawaaridii badnaa ee la socon jiray madaxda, waxaana xusid mudneyn inay la socdeen keliya laba dhalinyaro oo ilaalo gaara u kala ahaa labada mas’uul.
Gaariga ay labada mas’uul wada saarnaayen ayaa si caadi ah u dhex socday magaalada Doha, waxa uuna gaarigaasi kamid ahaa toboneeyo wadada isticmaalaayay sida ay baahisay warbaahinta Qadar.
Qorshaha magaalo ku wareejinta Erdogan ayaa waxaa lagu micneeyay mid Madaxweynaha Turkiga lagu tusaayay heerka amni ee ka jira dalka Qadar.